Kukho abantu abaninzi kwihlabathi abajongene nemibono embi. Iyeza lonyango libonisa ukubuyisela umbono ngokulungiswa kombono we-laser.
Ukulungiswa kwe-Laser yinkqubo yanamhlanje yokulungiswa kweso kunye nokungahlanjululwa kweso. Ingundoqo yendlela isempilweni yokukhetha i-laser kwiindawo eziqhelekileyo ze-cornea, ngenxa yolu hlobo obunomfanekiso ohlukileyo kwaye iqala ukukhankanya imijelo ekhanyayo ngendlela eyahlukileyo.
Ngaphambi kokuba kusebenze, umxhasi kufuneka enze i-survey, ngexesha apho iimfuno zabaxumi zixutyushwa khona kwaye izibonakaliso zenkqubo zibalwa. Ubungakanani bomsebenzi wonke unemizuzu engama-15-20, ngokuyinxalenye kuphela yomsebenzi wokulungiselela kunye novalelwe. Isenzo salo laser ngokwawo asihlali ngaphezu komzuzu.
Umbhobho we-laser ulawulwa yikhomputha, kwaye oku kuphelisa ngokupheleleyo ukuba kukho impazamo. Ukugeleza kwe-laser kunomsebenzi wokugqibela, apho kuthiwa "ukukhuphuka" kwamacandelo athile e-cornea. Ukulungisa i-myopia, "ukukhuphuka" kufuneka kwenziwe kwinqanaba eliphambili le-cornea, xa ulungisa iziganeko ezikude-iiperipharal, kwaye ukuba ufuna ukuphilisa i-astigmatism, kufuneka usebenze kwiindawo ezahlukeneyo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukulungiswa kweelasi kunokuchasene. Akukwenzelwa abantwana nabaselula ukuya kwi-18, kwaye ngamanye amaxesha ukuya kuma-25. Musa nje ukuyichitha kubantu emva kweminyaka engama-35 ukuya kwimi-40 ubudala, kuba ngeli xesha kukho ubude obude.
Ukulungiswa kwe-Laser kunye nemiphumo yayo.
Njengemisebenzi yonke, ukulungiswa kwe-laser kunemingcipheko yayo, kwaye imali enjalo abaqashi bayo abangeke bayilulekise ngesicelo sobuninzi. Makhe sicinge ngemiphumo ephambili yokulungiswa kwelasi.
1. Iingxaki ngexesha lenkqubo yokusebenza.
Oku kubangelwa zizathu zobugcisa kunye nezakhono zogqirha, izibonakaliso ezikhethiweyo ezingafanelekanga, ukungabi naso okanye ukulahleka kwento yokucoca, ukusikwa okungafanelekanga kwegobolondo. Ngokwezibalo, ipesenti yeengxaki ezinjalo zi-27%. Ngenxa yenkxalabo yokusebenza, ukuchithwa kwe-corneal, ukungalunganga okanye i-astigmatism ekwenziwe, ukuhluthwa kwamanye amazwe kunye nokunciphisa ubuninzi obubonakalayo obubonakalayo.
Uhlobo lwesibili lwemiphumo yokulungiswa kwelasi yezophulo zenzeke kwixesha elidlulileyo.
Imiphumo yale xesha ibandakanya ukuvuvukala, ukubola kwamehlo, i-retinal detachment, zonke iintlobo zokuvuvukala, umphumo "wesanti" emehlweni, njl njl. Ngokwezibalo, umngcipheko weziphumo ezinjalo ngu-2% yenani leentengiso. Iingxaki ezinjalo ziphakama kwiintsuku zokuqala emva kokulungiswa kwenkqubo ye-laser kwaye azixhomekeke kwi-qualification and skills skills. Isizathu salokhu ngumzimba womntu ngokwawo kunye nokukwazi ukuvuselela emva kokuhlinzwa. Ukususa le miphumo, kuya kuthatha ixesha elide ukuphilisa, kwaye kwezinye iimeko kufuneka wenze imisebenzi ephindaphindiweyo kwi-cornea. Kuyenzeka ukuba kwanamanyathelo anjalo awancedi ukugqiba ukubuyiswa emva kokuhlinzwa kwelasi.
3. Iqela elilandelayo lemiphumo, enomngcipheko omkhulu wokubakho, kubangelwa ukugqithiswa kwe-laser (ablation). Ukubeka nje, endaweni yesiphumo esilindelekileyo, isiguli sifumana esinye. Ngokuqhelekileyo kukho i-myopia eseleyo, okanye i-undercorrection. Ukuba kwenzeka phakathi kweenyanga ezi-1-2, kuya kufuneka ukuba wenze umsebenzi wesibini. Ukuba ufumana umphumo ohluke ngokupheleleyo (umzekelo, "-" "kwakukho" + "kunye nakwezinye iinkcukacha), ngoko kusebenza okwesibini kwinyanga ezintathu. Iimqinisekiso zokuthi ukuqhutyelwa kwakhona kuya kuphumelela - akukho.
4. Iziphumo ezinokwenzeka zekamva.
Wonke umntu uyazi ukuba i-hyperopia, i-myopia, i-astigmatism zizifo zamehlo ezenzeka ngezizathu ezithile. Ukulungiswa kuvumela kuphela ukulahla iziphumo zezi zifo, kodwa kungekhona kwizifo ngokwazo. Emva kwexesha, baya kuthatha yabo, kwaye umntu uya kuphinda alahlekelwe. Oku kuphela okusemgangathweni okunokwenzeka. Emva kokulungiswa, umntu uya kuhlala emele azibukele yena, ngenxa yempilo yakhe: ungazixhasi, ungabandakanyi umsebenzi wokuzilolonga, ungakhathazeki, njl njl. Ngaphandle koko, kunokubakho nemiphumo ngesimo sehaze okanye iigobolondo eziqwengileyo.
Impembelelo yecomputer kumntu womntu
Izinto zokuphilisa ze-Echinacea purpurea
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli ye-celandine
Indlela yokugcina nokuphucula imemori
Ukusetyenziswa kweoli efunekayo ye-rosewood
Silwa ne-dandruff ekhaya: zokupheka ze-shampoos ezingcono kwi-seborrhea
Akukaze kukhawuleze ukuba abe ngumama
Ukujonga njani kwi-resort kuyabiza kwaye kukuhle?
I-Pasta ene-caramisi e-carameliweyo kunye ne-Parmesan ushizi
Ingxaki enzulu nentombi endala
Izinto ezili-9 ezilungele ukuzenza nomhlobo kunokuba zingekho
U-Andrey Malakhov waphula iintliziyo zabalandeli bakhe ngeentetho ezinzulu kwi-Instagram
Indlela yokulungiselela i-aquarium ngaphambi kokuqalisa intlanzi
I-currant ebomvu idibanisa